ASOS nwere uwe DD + kacha mma - Ejiji
Ga-Ahụ Ndị Nweta Dị Enyi Na Ezi Na Ụlọ Sexhụnanya Mmekọahụ Mma Agbamakwụkwọ Agba Anya Ọrụ & Ego Ahụike Ntutu Isi
FYI, ASOS nwere uwe DD + kacha mma na Weebụ
ASOS / Sofia Kraushaar
Ruo ogologo oge, m ga-akwa emo na ọ dịghị nke ọ bụla n'ime uwe m na-asa ahụ nke dị na ezinụlọ. Ma ọbụghị na m na-ahọrọ iyi oke ala mpekele ma ọ bụ obere obere bikini n'elu. Ọ bụ naanị na ngbanye m bụ 32G, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịchọta uwe mmiri mmiri nke na-enye mkpuchi.
Masi obi nip wepupu, ichoputa ma ihe nha nke uwe ga adabara m dika achoro m na acho ule. Dị ka ọ dị, m na-ada ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 oge. Ọtụtụ eriri bikinis agaghị enwe obere eserese maka gals m na ọtụtụ ụdị tankị na-agbachi gburugburu eriri m, ebe ha na-enye mpekere karịa ka m nwere.
Ma enwere otu ebe ejiji ngwa ngwa a na-atụghị anya ya bịara napụta m karịa otu oge: ASOS. Ebe ahụ nwere ụdị bikinis na otu mpempe akwụkwọ nke na-ere site na oke bra, ọ bụghị S-XL na-enweghị isi. Iberibe na Fuller Bust ngalaba abughi ihe ndi na-adighi nma nke ichotara site na ebe nkpuchi-n'ezie ị maara ụdị, atụmatụ ndị na-etinye ọrụ na ejiji. Lee, ASOS na - ewere ọnọdụ ugbu a ugbu a ọ na - egwu ha. Ha adịla jụụ Mbipụta ehi , waa ẹphe ẹbo ndị mara mma ma na na, edgy underwire aghụghọ na mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ . Maka ndị na-ahọrọ mkpuchi zuru oke, nke ha stylesdị tankị na uwe elu T-uwe elu aghụghọ kwesịrị dabara ụgwọ ahụ.
Otutu uzo si na ASOS's Full Bust ngalaba kpebisiri ike site na ịhọrọ nha uwe gi (2 ka 14) wee buru oke iko gi (DD to I), yabụ ị ga-ejide n'aka na gị polka dot bikini bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ahụ gị na ara gị. A na-erekwa ala a iche iche, yabụ ị nwere ike itinye dollar gị na uwe dabara adaba. Yep, ọ bụ amamihe!
Ọ bụghị ihe niile dị na saịtị ahụ bụ ụlọ ASOS aha ụlọ; ha enwetala suut nke akara lingerie Wolf & Whistle, Peak & Beau, Figleaves na UK na eji egwu mmiri, Pour Moi. Ma, ikekwe nke kachasị mma, ọnụahịa ahụ dị ọnụ ala AF. Mgbe afọ isii ịzụrụ uwe sitere na ASOS, ọ nweghị otu ihe ruru ihe karịrị $ 60 (na mgbe bikinis ndị a na-aga ire ere, nke ha na-emekarị, ị ga - eme ngwa ngwa iji tụọ ogo gị).
O nwere ike ịbụ mmetụ na a na-ahụ ụdị ahụ m n'ikpeazụ. Ma ọ bụ mmetụta ire ụtọ nke mmiri mmiri nke dabara na n'ezie nwere ike ịnwe, mana m ga-eme ihe n'eziokwu, enwebeghị m ahụ iru ala iru ala n'akụkụ osimiri ma ọ bụ dina n'akụkụ ọdọ mmiri.
esi nweta ntutu ntutu dị mma n’ụlọ
N'ebe a, zụta ụfọdụ n'ime ezigbo ASOS Fuller Bust swimsuits.
RELATED: 20 Nkecha na Flattering Swimsuits N'okpuru $ 100
1. ASOS DESIGN Fuller Bust Bikini Top With Notch na High Leg High n'úkwù Bikini Bottom
B TOTA TOP ($ 23)
B B ala ($ 23)
Top dị na nha 30E ruo 38I; ala dị na nha 0 ruo 14.
2. ASOS Kere Fuller Na Na Bandeau bikini Top na kenha N'ala
Ịzụta TOP$ 26;$ 10)
B B ala ($ 29;$ 19)
Top dị na nha 30E ruo 38H; ala dị na nha 0 ruo 14.
3. Peek & Beau Wepụ Swimsuit
Zụta ya ($ 51)
Odikwa na 2DDD rue 14F.
mee ya ihe nkiri na ntanetị
4. ASOS DESIGN N'okpuru Bikini na High Waist Bikini Bottom
B TOTA TOP ($ 32)
B B ala ($ 29)
Top dị na nha 30DD ka 38I; ala dị na nha 0 ruo 14.
5. ASOS Kere Ruched Tie Front Swimsuit
Zụta ya ($ 45)
Odikwa na nha 0E rue ​​14I.
6. Peek & Beau Kechie Bikini Top na Bikini Ala
B TOTA TOP ($ 35)
Top dị na nha 2DDD ka 14F; ala dị na nha 2 ruo 14.
soda na ihu mmetụta
7. Peek & Beau Ifuru Stripe Swimsuit With Ruffle na echebe
Zụta ya ($ 57;$ 20)
Odikwa na 4D rue 12E.
8. Wolf & Whistle Strung na-ezukọta n'okpuru Halter Bikini Top na Bikini Bottom
Ịzụta TOP$ 42;$ 15)
B B ala ($ 26;$ 9)
Top dị na nha 30DD ka 36I; ala dị na nha 0 ruo 12.
Njikọ: 11 Mfe Uwe Omume Ezumike Anyị Na-azụta si Amazon
Categories Rentzụ Ụmụ Ejiji News Nri
15 Super Cool NYC Charities iji kwado ezumike a (na mgbe niile)
Onwere Onye jidere Starbucks Cup n’abalị Ikpeazụ ‘Egwuregwu nke ocheeze’?
5 Okooko Osisi Na-adịru Ogologo You nwere ike Buyzụta na Glọ Ahịa Ngwaahịa
Isnye bụ Fiancé Ọhụrụ nke Demi Lovato, Max Ehrich? Nke a bụ ihe niile anyị maara
Ebe iri na abụọ kachasị ebi na NYC
9 Ezigbo Nro Na Ihe Ha Na-ekwu
Chefuo Nnwale na Njehie: Ndị a bụ ndị kacha mma 10 maka ndị na-agba ọchịchịrị
9 Echiche Sexgha Mmekọahụ You Kwesịrị Ikwenye
‘Akụkọ Nwaanyị Enyemaka’ Na-alaghachi Hulu Oge 5 — Nke a bụ Ihe Anyị Maara
30 Fall Porch Decor Echiche maka Mgbụsị akwụkwọ Ntinye Mgbụsị akwụkwọ
Kpoo Okpomoku Uzo na Uzo a
12 Pụrụ Iche Motherbọchị Ndị Nne Onyinye Nweta Gị zingtụnanya Mama a Afọ
Naanị Margot Robbie nwere ike ịwepụ Sequin Tunic na Cannes
Dika nwa ogwu nwa, achorom m na enwere nkpuru nri Granola a na-aru
Ọnye na-bụ Jennifer Lawrence's Di, Cooke Maroney?
Ezigbo ezinụlọ 25 na-ekiri na ụmụaka
Ndị a na-agba agba bọmbụ 13 a na-ere ngwa ngwa ma anyị nwere ike ịhụ ihe kpatara ya
ihunanya Hollywood ndepụta nkiri ndepụta
mmanụ kalonji maka nkwọcha
kasị mma akụkọ ịhụnanya fim nke Hollywood
ọchị na-atọ ọchị banyere iri nri
taurus nwere ike 2018 horoscope